Mayelana nathi - Chengdu Dien Photoelectric Technology Co., Ltd.
Siyabonga ngokukhetha i-DIEN TECH! Singumkhiqizi oqeqeshiwe nomhlinzeki wento ewuchungechunge esuselwa ku-crystal! Sigxila kuzicelo zamakhasimende futhi sizithuthukise ngokuya ngempendulo engaletha ulwazi olungcono lokubambisana nathi.ku-DIEN TECH, sinesithakazelo esikhulu ekubandakanyeni izinhlelo zethu zocwaningo futhi sihlole ubuchwepheshe obusha obuholela ezingeni elisha lokusebenzisa namakhasimende ethu . Sihlala sifunda kulokho esikwenzile futhi sizivivinya ukwenza kangcono.Lapha ku-DIEN, sikhetha iqembu lethu ngamazinga avulekile futhi aqinile, sinoDokotela abazibophezele ekukhuleni kwekristalu iminyaka engaphezu kwengu-12 futhi basimangaza thina amakhasimende, sinabalingani bethu abakwazi ukulalela nokutadisha kusuka emisebenzini futhi bazame ukucebisa ulwazi lwabo ukuze baqonde kangcono amakhasimende.
-ULeon Lee Umphathi omkhulu
Ulungele ukufunda kabanzi? Xhumana nathi namuhla ngesilinganiso samahhala!
Njengenkampani yezobuchwepheshe esebenza ngamandla, yamakristalu, iDIEN TECH igxile kakhulu ocwaningweni, ekwakhiweni, ekwenziweni nasekuthengisweni kochungechunge lwamakristalu angama-nonlinear optical, amakristalu e-laser, amakristalu we-magneto-optic nama-substrates. Izinga eliphakeme nelokuncintisana lisetshenziswe ngokuqinile ekufayelweni kwezimakethe zesayensi, ubuhle nezimboni. Amathimba ethu okuthengisa anikezelwe kakhulu namaqembu wobunjiniyela abanolwazi azibophezele ngokuqinile ekusebenzeni namakhasimende avela ebuhleni nasezimbonini ezifakiwe kanye nomphakathi ocwaningayo emhlabeni wonke ngezinselelo zezicelo ezifakwayo.
Ukukhiqizwa kuhlangabezana nazo zonke izidingo zamazinga aseYurophu nawomhlaba. Ngokubambisana okuseduze namakhasimende ethu, i-DIEN TECH inika amandla onjiniyela ukuthi benze ukutholwa kokuthuthuka futhi bathuthukise izinto ezintsha ezithuthukisa ukusebenza kwezicelo zabo. Ekomkhulu layo eliseChengdu, eChina, iDIEN TECH nethimba lalo elinethalente nabasabalalisi bathuthukise amakhasimende emhlabeni jikelele, kufaka phakathi i-USA, iYurophu, i-Asia, neNingizimu Asia. Ngokuqondene nekusasa, i-DIEN TECH ngeke ishiye isinyathelo sayo sokuya komunye wabaphakeli bezinto zombane ezithembekile futhi abaqeqeshiwe emhlabeni.
I-DIEN TECH ezinikele ukwakha phezu kobubanzi bayo bemikhiqizo nezixazululo, isisekelo sayo sokwesekwa ngemuva kokuthengisa kanye nedumela eliqinile phakathi kwamakhasimende ayo. Futhi ukuhlangabezana ngokugcwele nezidingo zamakhasimende ayo kanye nokwakha izinto ezithembekile ezisekelwe ku-Crystal namadivayisi.